အမေရိကရဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်မယ်ဆိုရင်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » အမေရိကရဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်မယ်ဆိုရင်….
အမေရိကရဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်မယ်ဆိုရင်….
Posted by kai on Apr 30, 2010 in Critic, Politics, Issues, U.S. News | 1 comment
California Governor Arnold Schwarzenegger Photo: AP
မြန်မာတို့ရဲ့ ဇတ်လိုက်ကြီး အာနိုးတယောက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ သမတအဖြစ်ရွေးခံမယ်ဆိုရင်ပေါ့..
အမေရိကရဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အယင်ပြင်ရပါလိမ့်မယ်.။ အဲဒီမှာ ဘယ်လောက်ခက်သလဲရေးထားတာလေးတွေ့လို့ဆက်စပ်ပြီးတင်ပေးတာပါ။
သတင်းမှာ…အဲဒါနဲ့ပါတ်သက်တာကို အနီရောင်ပြောင်းပေးထားပါတယ်။ အဲဒီမှာ ရာခိုင်နှုန်းတွေလည်း ပါပါတယ်။ ဗဟုသုတအဖြစ်ပေါ့..။
မြန်မာတွေရဲ့ အခု ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ပြောရယင်..
တချို့ က..အမတ်အဖြစ် ပြိုင်အရွေးခံပြီးရင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်လိုက်မယ်ဆိုလား..ကြားနေဖူးလို့..
ကြည့်ရတာ…မြန်မာပြည် ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့က ပိုခက်မယ်သေချာပါကြောင်း..။
Fri Apr 30, 1:01 pm ET
In an appearance Thursday night on the “Tonight Show” to promoteanew documentary about gerrymandering, California Gov. Arnold Schwarzenegger told Jay Leno that if the states were to ratifyaconstitutional amendment permitting foreign-born citizens to run for president, he’d throw his hat in the ring. You can watch the exchange here:
This isn’tanew position for The Governator. As far back as 2004, Schwarzenegger told “60 Minutes” he wished he could run. That same year, GOP Senator Orin Hatch of Utah,aSchwarzenegger ally, even introducedaconstitutional amendment to try to make it possible.
But the obstacles to any constitutional amendment are steep. Even ifanew bill were to be introduced — hardlyapriority for an already busy Congress led by Democrats with no foreign-born presidential prospects on its bench — it would have to win two-thirds majorities in both the House and Senate. Then it would be submitted to all 50 state legislatures for ratification — and would have to win approval from three-fourths of them.
It’s not surprising, then, thataSchwarzenegger spokesman told the Associated Press that the governor doesn’t expect that such an amendment is going to happen.